IGAD oo u dalabtay Soomaaliya 20 kun oo askari - BBC Somali
IGAD oo u dalabtay Soomaaliya 20 kun oo askari
Image caption Taangi ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo gubtay
Hogaamiyeyaasha urur goboleedka IGAD, ayaa shir deg deg ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadda iyo ammaanka ee Soomaaliya ku yeeshay magaalada Addis Ababa.
Shirku waxa uu go'aansaday qoddobo dhawr ah oo ay ka mid yihiin in AMISOM iyo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay lagala shaqeeyo sidii labaatan kun oo askari loo keeni lahaa dalka Soomaaliya oo dhan.
Shirku, waxa uu hoosta ka xariiqay si taas loo suurta galiyo ay muhiim tahay in xoogagga Soomaaliya loo diyaar gareeyo suurtagalnimada in ciidamo dalalka deriska ka socda ay soo galaan dalka.
Shirku waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM aan la gaarsiin heerkii horey loogu heshiiyay, wuxuuna go'aansaday in laba kun oo nabad ilaaliyaal ah oo AMISOM hoostaga sida ugu dhaqsiyaha badan loo geeyo dalka.
Image caption Madaxweynaha Soomaaliya, Shariir Shiikh Axmed, xilli uu sii marayay magaalada Nairobi
Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Shiikh Axmed, oo shirkaasi ka hadlay ayaa ku baaqay kaalmo caalami ah oo looga hortago kooxaha kacdoonka wada ee Islaamiyiinta.
Madaxweyne Shariif waxa uu ka digay sida hadalka uu u dhigay in Soomaaliya ay gacanta ugu jirto Al-Qaeda iyo kooxo xag jir ah.
Shirkan magaalada Addis ababa ayaa la filayaa go'aamada laga soo saaray la hor dhigi doono shirweynaha guud ee Midowga Afrika oo dhici doona dabaqaayada bishan.